4 Ngwọta eke Iji gwọọ ọkụ ọkụ - Ibi ndụ ahụike 2022
4 Ngwọta eke Iji gwọọ ọkụ ọkụ
Ọgwụ FDA kwadoro maka ọkụ ọkụ
Ngwọta eke Iji gwọọ ọkụ ọkụ
1. Nri dị mma
2. Jikwaa ọkwa nrụgide
3. Mmụba vitamin E oriri
4. Yiri uwe dị mma
Igwe ọkụ na-atụghị anya ya na mberede na-agbawa n'ime ahụ gị nwere ike ime ka ị na-enwe mmetụta na-adịghị mma na ahụ erughị ala, na-achọ ume nke ume n'oge nsọpụ. Pasent 85 nke ụmụ nwanyị America nọ na United States na-enweta ọkwa ọkụ dị iche iche ka ha na-abịaru nso menopause, ka Womenshealth.gov na-ekwu. Ọmụma ọkụ na-ekpo ọkụ nwere ike ịmalite n'oge dị ka afọ abụọ ruo atọ tupu oge ịhụ nsọ nwanyị ikpeazụ ma dịruo ihe dị ka ọnwa isii ruo afọ 15 ka oge ikpeazụ gasịrị. Ka ị na-amalite ịka nká, ọkụ na-ekpo ọkụ na-aghọwanyewanye nke ọma, karịsịa ma ọ bụrụ na mgbanwe site na oge ọ bụla na-enweghị oge na-adị ngwa ngwa. Ogo ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ na-adịgasị iche site n'otu n'otu gaa n'otu n'otu, dịka ụfọdụ ụmụ nwanyị na-enwe mmetụta ole na ole n'ime afọ, ebe n'ọnọdụ dị oke njọ, ụmụ nwanyị na-enwe mmetụta 20 kwa ụbọchị, dịka Prevention.com si kwuo. Ọ bụrụ na nwanyị na-enweta ọtụtụ ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ n'abalị, ọ nwere ike ịgbalị ịrahụ ụra na ọbụna na-enwe ụra na-adịghị ala ala. Ọ bụ ezie na a ka amabeghị ihe na-akpata ọkụ ọkụ, ọgwụgwọ na-enye ahụ efe nke ihe mmetụta okpomọkụ dị n'ụbụrụ.
Ndị na-ahụ maka nri na ọgwụ ọjọọ nke U.S. (FDA) kwadoro na nso nso a bụ BRISDELLE, ọgwụ ọhụrụ emebere iji gwọọ ọkụ ọkụ n’ime ụmụ nwanyị menopause. Mana esemokwu gbasara ọgwụ ahụ nwere ike ime ka ọtụtụ ụmụ nwanyị wụpụ wee nagide ihe omume ha. BRISDELLE nwere miligram 7.5 nke paroxetine, ọgwụ a na-eji agwọ ọrịa uche, bụ́ nke na-ewelite nchegbu n'ihe ize ndụ ahụ ike nke ọgwụ ahụ pụrụ ịdị na-enwe n'ahụ́ ụmụ nwanyị na-enwe mmekọahụ. Obere doses nke antidepressants nke jikọtara ya na ibelata ọkụ ọkụ, dị ka venlafaxine, paroxetine, na fluoxetine, adịghị arụ ọrụ dị ka ọgwụgwọ hormone ma nwee ike ịkpata mmetụta dị njọ dị ka ọgbụgbọ, dizziness, na uru ibu n'etiti ndị ọzọ, Mayo Clinic na-ekwu.
Ọgwụ iji gwọọ ọkụ ọkụ na ụmụ nwanyị menopause na-ebutekarị mmerụ ahụ karịa nke ọma ma nwee ike ịbawanye ohere nke ịmalite ọrịa ndị ọzọ. Ndị ọkachamara na-arụrịta ụka gbasara ọgwụgwọ anụ ahụ dị ka mgbatị ahụ maka ma ọ na-enyere aka belata ọkụ ọkụ n'ime ụmụ nwanyị. Nchọpụta e bipụtara n'akwụkwọ akụkọ Menopause na-egosi na mmega ahụ na-eme ihe niile ma na-eme ka ọkụ ọkụ dị mfe. Ndị ọrụ nyocha nyochara ụmụ nwanyị 248 bụ ndị na-akụ menopause ma ọ bụ ndị mechara menopause ma kewaa ha ụzọ abụọ. Ngụkọta ụmụ nwanyị 106 na-eme ọzụzụ mgbatị ahụ ugboro atọ n'izu maka izu iri na abụọ ma ndị ọzọ na-eme ihe ndị ha na-eme kwa ụbọchị. Nsonaazụ chọpụtara na ụmụ nwanyị ọcha bụ ndị sonyere na mmemme mmega ahụ hụrụ mbelata ọkụ ọkụ ma e jiri ya tụnyere ụmụ nwanyị ọcha na-eme ihe omume ha kwa ụbọchị, mana ọ nweghị ihe dị iche a hụrụ na ụmụ nwanyị ojii. Nsonaazụ nke ọmụmụ ahụ mere ka ndị nchọpụta kwubie na ụmụ nwanyị ndị na-emebu ahụ ike tupu usoro mmemme ahụ nwere ọganihu dị ukwuu na ọkụ ọkụ ha na-ekpo ọkụ karịa ndị na-adịghị emega ahụ na mbụ.
Iji gwọọ ọkụ na-ekpo ọkụ na-enweghị mmetụta dị n'akụkụ ọgwụ ndenye ọgwụ wee nọgide na-adị mma ma dị mma, gbalịa ọgwụgwọ anọ ndị a sitere n'okike nke ga-enyere gị aka ijide onwe gị.
Achọpụtala ụfọdụ nri dị ka ngwaahịa mmiri ara ehi, ngwaahịa anụ, na nri na-esi ísì ụtọ bụ ndị kacha enye aka na ọkụ ọkụ. Ọbụlagodi na-akwụsịghị nsọ, nri ndị na-esi ísì ụtọ nwere ike ịkpalite ọkụ na-ekpo ọkụ n'ahụ gị, na-eme ka ọsụsọ na-agba gị ma na-agbapụta gị n'oge niile. Kama, họrọ iri nri soy na-abụghị GMO iji mee ka protein dịkwuo elu, nke na-enyere aka na mmepụta homonụ n'ime ahụ. Agwa oriri dị ka agwa soy nwere ike inye aka ịchịkwa ọkụ ọkụ n'ihi na ha nwere genistein na daidzein, nke bụ ogige estrogenic, ka Naturalnews.com na-ekwu.
Eziokwu na-atọ ụtọ: Soy bụ ihe dị mkpa na nri ndị Japan na-eri, nke nwere ike ịkọ ihe kpatara na ọ bụ naanị pasenti asaa nke ụmụ nwanyị Japan menopause na-ata ahụhụ site na ọkụ ọkụ.
Ọ bụ ezie na a ka amabeghị ihe kpatara ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ, ndị dọkịta na-eche ma ọ bụrụ na ahụghị nhata nke homonụ nwere ike bụrụ ihe mgbaàmà nke menopause. Ọkwa hormonal na-agbanwe mgbe niile nke ahụ nwanyị n'oge nsọpụ nwere ike ịkpalite nchekasị na-adịghị ala ala. Dr. Mercola, dibia na dọkịta na-awa ahụ nke Illinois nyere ikike, na-ekwu na ọ bụrụ na nwanyị nwere obere progesterone na ọkwa estrogen dị elu, nke a na-enye aka na nrụgide. Ya mere, ọ na-atụ aro ka ụmụ nwanyị na-eleba anya na ọkwa nrụgide dị ka ụzọ ha ga-esi edozi ọkwa hormone ha.
Eziokwu na-atọ ụtọ: Nchegbu nwere ike ime ka ọkụ na-ekpo ọkụ n'ime ahụ, ọbụna na ndị inyom na-abụghị ndị menopause n'ihi na nrụgide na-ahapụ adrenaline n'ime ọbara, nke na-eme ka ọbara na-erugharị ma na-eme ka ọ dịkwuo elu na ahụ gị.
Ejikọtala vitamin E na mbelata oke ọkụ ọkụ na ụmụ nwanyị meopausal. N'ime nnyocha e mere na Tarbiat Modarres University dị na Tehran, Iran, ndị nchọpụta nyochara mmetụta vitamin E na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na ndị ọrịa 54. Nke mbụ, ndị na-eme nchọpụta mere otu placebo ugboro abụọ na-achịkwa kpuru ìsì kwa ụbọchị maka izu anọ, na-esote otu izu, na-esotekwa 400 IU vitamin E soft gel cap kwa ụbọchị maka izu anọ na-esote. Nchọpụta nke ọmụmụ ahụ gosiri na mgbe ndị ọrịa na-ewere vitamin E soft gel cap, enwere mbelata oke ọkụ ọkụ n'etiti ndị ọrịa.
Eziokwu na-atọ ụtọ: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, mkpụrụ osisi na-ekpo ọkụ, na mkpụrụ osisi bụ ezigbo isi iyi nke vitamin E. Nchikota nke ihe ndị a na-eme ka salad ọnụ.
Ihu igwe na-ekpo ọkụ na-ebute ọkụ ọkụ ma nwee ike ime ka mgbaàmà gị ka njọ. Iji belata ahụ erughị ala na mgbu, họrọ iyi uwe na-adịghị mma nke na-adịghị ahụkebe n'akụkụ ikpu ma ọ bụ afọ afọ gị. Ụmụ nwanyị ndị na-enwe oke ọkụ na-ekpo ọkụ nwere ike ịtụgharị gaa na "uwe menopause," ma ọ bụ uwe emebere ka ọ dị mfe na ikuku, ka Consumerhelathdigest.com na-ekwu. Ịnọ jụụ ụbọchị niile na iyi uwe dị fechaa nwere ike ibelata ọnụ ọgụgụ ihe omume ị na-enwe ụbọchị niile.
Eziokwu na-atọ ụtọ: T-shirts menopausal bụ ụdị uwe ndị menopause na-ewu ewu n'ihi na enwere ike eyi ha n'okpuru suut ma ọ bụ sweaters na-enweghị onye ọ bụla mara.
Iji mụta maka ọgwụgwọ okike ndị ọzọ maka ọkụ ọkụ, gaa na Global Healing Center.
Nhọrọ 10 kacha mma swiiti iji nye Halloween 2021 a
Ọ na-atọ gị ụtọ ime ememme Halloween n'afọ a? Nke a bụ usoro swiiti kachasị mma ị nwere ike inye ndị na-aghọ aghụghọ ma ọ bụ ndị na-agwọ ya
Ụbọchị ahụike uche ụwa 2021: 10 iji nyere aka melite, na-edobe ahụike uche
Ụbọchị ahụike ụwa nke ụwa 2021, mụta maka ụzọ dị iche iche ị ga-esi meziwanye ahụike uche gị ma bie ndụ obi ụtọ na nke nwere nzube
Edobeghị ndị na-ese anwụrụ ọkụ na COVID, n'agbanyeghị ihe ọmụmụ mbụ kwuru
Na mmalite ọrịa ọrịa coronavirus, ndị nchọpụta sụrụ ngọngọ na nchọpụta a na-atụghị anya ya: ndị na-ese anwụrụ yiri ka a na-echebe ha pụọ ​​​​na mmetụta kachasị njọ nke COVID
Ihe mkpuchi ihu ezuola iji gbochie ọrịa COVID-19 Delta Variant?
A na-enwe arụmụka na-aga n'ihu banyere ụdị mkpuchi ihu kwesịrị iyi n'ebe ọha na eze n'etiti ntiwapụ nke ụdị delta